न्युरोडको आकाश छातै छाता ! कसरी बन्यो काठमाडौंमा अम्ब्रेला स्ट्रिट ? (तस्वीर) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/न्युरोडको आकाश छातै छाता ! कसरी बन्यो काठमाडौंमा अम्ब्रेला स्ट्रिट ? (तस्वीर)
घोडेजात्राको दिन मनाइने पाँचरे जात्रामा न्युरोडवासी रथ तान्दै, सडक छाकिने गरी नान्छन् । यसरी खुसी मनाउन वर्षभरि यस्तो संयोग अरूदिन जुर्दैन ।यो वर्ष त कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पाँचरे जात्रामा पनि खुलेर नाच्न पाएनन् । त्यसमाथि लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प भएपछि मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडका व्यापारीहरुलाई विक्षिप्त बनाउन पुग्यो ।
खस्किएको व्यापारलाई उकास्न मानिसहरुलाई न्यूरोडतर्फ ध्यान तान्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि बनेको योजनाले न्युरोडको एउटा गल्लीलाई आकर्षक बनाएको छ ।न्युरोड गेटबाट सुन्धारा मार्ग हुँदै संकटा जाने बाटोमा करिब ४०० वटा जति छाता आकाशमा झुण्ड्याइएका छन् । करिब १५० मिटरको दुरीमा रंगीचंगी छाताले ढाक्नेगरी सडकको छेउछाउमा करिब ३० वटा गमलामा फूलहरु फुलाइएका छन् ।
यसले मानिसहरुलाई निकै लोभ्याएको छ । टिकटक बनाउन र फोटो सेसन गर्न पुग्नेहरु धेरै छन् ।चितवनमा पनि एक वर्षअघि यही कन्सेप्ट अनुसार ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’को रूपमा पर्यटकलाई आकर्षक बनाउने प्रयास गरिएको थियो । काठमाडौंमा सुरु गरिएको यो नयाँ अवधारणाले १० दिनमा नै लोकपि्रयता हासिल गरेको संकटा क्लबका सचिव आशीषमान सिंह बताउँछन् । ‘पहिले दैनिक १००० जनाजति आउँथे होला, अहिले दैनिक १० हजारभन्दा बढीले यहाँको अवलोकन गर्ने गरेका छन्’ सिंह भन्छन्, ‘यसले विस्तारै व्यापार पनि बढाउला ।’
मंसिर महिनाको अन्तिम दिन न्युरोडको तबहाल क्षेत्रका व्यापारीहरुबीचको चिया गफको क्रममा कोरोनाको त्रास कम भएपनि व्यापारले गति लिन नसकेको विषयमा सबैले चिन्ता व्यक्त गरे । व्यापारलाई उत्थान गर्ने भन्ने मतहरु पनि आए । कुराकानीकै क्रममा संकटा क्लबका सचिव सिंहले युरोप जाँदा ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ देखेको सुनाए । त्यही प्रयोग गर्न अरु पनि सहमत भएपछि ८० हजार रुपैयाँ संकलन भयो ।
र, त्यही दिनदेखि सुरु भयो बाटो सिँगार्ने काम ।
न्युरोड गेटबाट सुन्धारा मार्ग हुँदै संकटा जाने बाटोमा करिब ४०० वटा जति रंगीचंगी छाता झुण्ड्याइएका छन् । करिब ३० वटा गमलामा फूलहरु फुलाइएका छन् ।त्यही क्षेत्रमा पर्ने एउटा बौद्ध स्तुपालाई पनि रातिमा वार्म लाइटले रंगीचंगी बनाइएको छ । ‘खाली ठाउँ कतै पनि राखिएको छैन, सोही खाली ठाउँलाई व्यवस्थापन गरेर सुन्दरता थप्ने प्रयास गरिएको छ’ सिंह भन्छन्, ‘दरबारमार्गको जस्तो लाइटिङ गर्न रुख नभएर पोलमै बत्ती बेरेर बाल्न थाल्यौं ।’
यो सडकमा दुईपांग्रे र हलुका चारपांग्रे बाहेक अन्य सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने अव्यवस्थित पार्किङ हटाइएको छ । बिहान नगरपालिका र दिउँसो क्लबका कर्मचारीले नियमित सरसफाइ गर्ने गरेको संकटा क्लबका सचिव सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म ९/१० लाख खर्च भएको छ, जुन क्लब, स्थानीय व्यापारी र नगरपालिका वा वडा कार्यालयले व्यहोरेका छन् ।
दमक नगरपालिकाको डोजरले घर भत्काइदिएपछि घर विहीनसुकुम्बासीको बिजोग, खुला आकाशलाई छानो बनाएर वास बसेका तस्विरले कसको मन नछोला